के हो त ड्रागन फल ? यसबाट कती कमाउन सकिन्छ ? हेर्नुहोस । – Agromart
By : agromart nepal | On May 7, 2018
यो खेती तराईदेखी उच्च पहाडी जमिन सम्म गर्न सकिन्छ । कारीब समुन्द्री सतह देखी ३००० मिटर सम्म यसको खेती गर्न सकिन्छ । यस खेतिको लागी पानी आवश्यक नपर्ने हुँदा धेरै सुक्खा ठाउँहरुमा पनि यसलाईइ मज्जाले फलाउन सकिन्छ ।